असार महीनामा आईपीओ निष्कासन गरेको साधना लघुवित्तको नाफा १५१ % वृद्धि
साउन १८, काठमाडौं । गत असार महीनामा आईपीओ निष्कासन गरेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण आइतवार सार्वजनिक गरेको छ ।
वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा नाफा १५१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कम्पनीले गत आवको चौथो त्रैमासमा रू.४ करोड २ लाख नाफा कमाएको हो । यो नाफा अघिल्लो आवको यसै अवधिमा रू.१ करोड ६० लाख कमाएको थियो ।
गत आवको चौथो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानीमा वृद्धि र रू. २ करोड ७५ लाख खराब कर्जा उठाएकाले कम्पनीको नाफामा वृद्धि भएको हो । उक्त कम्पनीले निष्कासन गरेको आईपीओ हाल नेप्सेमा सुचिकरण प्रक्रियामा रहेको छ ।
कम्पनीले गत आवको चौथो त्रैमासमा रू. १३ करोड ७३ लाख खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो आवको तुलनामा १९६ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ४ करोड ६२ लाख ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।
आईपीओ निष्कासन पछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २१ करोड ७७ लाख पुगेको छ भने जगेडा कोषमा रू. ६ करोड १२ लाख सञ्चित भएको छ । असार मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ४५ करोड ५५ लाख निक्षेप संकलन गरेको छ भने रू. १ अर्ब ७१ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
क्त कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १८ दशमलव ५०, प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १२८ दशमलव १३ र तरलता अनुपात १३ दशमल ९७ प्रतिशत रहेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनमा कम्पनीको केन्द्र बैठकहरु आंशिक रुपमा मात्रै सञ्चालन भएकाले कर्जा तथा लगानी असुलीमा व्यवसायिक योजना अनुसार नभएकाले चौथो त्रैमासमा आम्दानी सन्तोषजनक रुपमा वृद्धि हुन नसकेको कम्पनीले प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।